မျက်နှာကျက်များ နှင့် နံရံများတွင် အိမ်သုတ်ဆေးအစားထိုး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လှပဆန်းသစ်သော Wallpaper များ၊ မှန်နောက်အစား မှန်ကြည်များကို မှန်ကပ်စတေကာများဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် အလှဆင်ပေးသည့်အပြင် လက်လီလက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။(၃)နှစ်အာမခံပေးခြင်း၊အချိန်ကုန်သက်သာ၍ ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်း၊အနံဆိုးများ၊ဖုန့်မှုန့်များမရှိ၍ အိမ်ညစ်ပေမှုကင်းဝေပြီး သက်တောင့်သက်သာနေထိုင်နိုင်ခြင်း၊Wallpaper ကပ်ပြီးညစ်ပေသွားသော နံရံများကို ရေဖြင့် အခြောက်လျှော်၍ ရပြီး တောက်ပြောင်စေပါသည်။ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း၊ အရောင်များကို အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားကောင်းမွန်သဖြင့် အရောင်မှေးမှိန်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရလွယ်ကူပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စေသည်။သုတ်ဆေးနှင့်ကြွေပြားများထက် နံရံကပ် Wall Paper သည်အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းများနှင့် ခမ်းနားထည်ဝါသော အခန်းများပိုင်ဆိုင်ချင်သူများအတွက် Mother&#039;s SON မှ Wallpaper ခများကို ချိူသာသောဈေးနှုန်း၊ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှု သပ်ရပ်သော လက်ရာများဖြင့် Original ကော်သုံး၍(၃)နှစ် အာမခံဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်အလှဆင်ပေးသည့်အပြင် လက်လီ၊လက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်လည်း ညီညွတ်ပြီး ရောဂါပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်သည့် ကြမ်းခင်း ( Royal Oak , Ion Wood )
Ion Wood ကုမ္ပဏီမှ အမေရိကန် တော်ဝန် ဝက်သစ်ချပင်မှ ရသော သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကြမ်းခင်းများကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် တင် သွင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ဒါ့အပြင် ၄င်း ကြမ်းခင်းများသည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်လျော်ပြီး ၂၁ရာစု နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် Ion Wood သစ်သား ကြမ်းခင်းပြားများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ Ion Wood အခင်းသည် လေ့ လာစမ်းသပ် ချက်များအရ တောထဲတွင် တွေ့ ရှိရသည့် အမ အိုင်းယွန်း ပမာဏ နှင့်တူညီနေ သည်။ ၄င်း အမ အိုင်းယွန်းများသည် လေထဲမှပေါက်ဖွားသည် ဘတ်တီးရီးယား များကို တဖြည်းဖြည်းပပျောက်စေ၍ လေကို သန့် စင်စေသည်။အိုင်းယွန်း ကို အခင်းပြုလုပ် ခြင်းဖြင့် သဘာဝအတိုင်း ကုသနိုင်သည့် ကုထုံးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီး မင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းအိုင်းယွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကြမ်းခင်းများကို အသုံးပြုပါက ကျန်းမာ ရေးနှင့်လည်းညီညွတ်ပြီး ပိုးမွားများကို လည်းသေစေနိုင်သောကြောင့် လူကြီးမင်း တို့ အနေဖြင့် ၄င်းကြမ်းခင်းကို အသုံးပြုလိုပါက Ion Wood ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုုင်ပါသည်။
SCG Smartblock 10 cm. thick
ALC block သည် အဆောက်အအုံ ၏ အတွင်းပိုင်း နှင့် အပြင်ပိုင်း နှစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးပြုရသင့်တော်အောင် အထူးပြုလုပ်ထားသော Block ဖြစ်သည်။သင့်နေအိမ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချ ဘေးကင်းလုံခြုံ မှု နှင့် ခိုင်ခံသော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ကိုအပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။လျှပ်စစ် စွမ်းအားကို ၃၀% အထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး သာမန် ကွန်ကရစ်ထက် ၁၀ ဆ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သည်။ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဆူညံသံများကို အထဲသို့ ဝင်မလာနိုင်အောင် တားဆီးပေးသည်။သာမန် ကွန်ကရစ်ထက် ငလျင်ဒဏ်မှ ဖြစ်ပေါ်သော Stress စုပ်ယူမှုအား ပိုကောင်းသည်။ရွှံအုတ်များထက် ၂ဆ ၃ဆ ပိုမို ပေါ့ပါးပြီး ၄ဆ ၅ဆ ပိုမို သိပ်သည်းပြီး strength ဆုံးရှုံးမှု မပါဝင်သောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ စရိတ်များ လျော့ချနိုင်သည်။အချိန်တိုတိုဖြင့် အလွယ်တကူ ဆောက်လုပ်နိုင်သောကြောင့် Installation ကို ၅၀% လျော့ချပေးသည်။
ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး သေသပ်လှပ သည့် ကြမ်းခင်း အလှဆင် ပစ္စည်း ကျွန်း ပါကေး ( Teak Parquet )
Myanmar May Kaung Wood Industry ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် အဆောက်အဦး ကြမ်းခင်းများကို အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကျွန်းသစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ပါကေးပြားများဖြင့် အလှဆင် ခင်းကျင်း နိုင်ရန် လူကြီးမင်းတို့ အတွက်ထုတ်လုပ် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်း ပါကေး ( Teak Parquet ) သည် သေသပ်လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် အပြင် ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထား သောကြောင့် ကြာရှည် အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အိမ်ကြမ်းခင်းများ အားအလှဆင်ရန်အတွက် ပါကေး ( Teak Parquet ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Myanmar May Kaung Wood Industry ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
M-S Trading ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးမြင့်မား သည့်ခေတ်မှီ အဆင့် တန်း မြင့် ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး တို့ ကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။ ၄င်းပစ္စည်းများသည် အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့်အပြင် သေသပ် လှပပီး ကျန်းမာ ရေးနှင့်လည်း ညီညွတ်ပါသ ည်။ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခိုင်ခံ့သော Laminated Board များကို ဝယ်ယူလိုပါက Laminated Board ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်မှာယူ နိုင်ပါသည်။
SCG Smartblock 7.5 cm. thick
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် Formwork လုပ်ငန်းသည် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေသဖြင့်၊ ၎င်း Formwork လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး - Safety အတွက် စိတ်ပူပန်နေရပါသလား ? ( Formwork ပွင့်ထွက်တာတွေ၊ ပြိုကျတာတွေ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေပါလား ) - သစ်ဈေးတွေတက်နေလို့ ကုန်ကျစရိတ်များမှာတွေ၊ သစ်အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလို့ မရလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေအတွက် စိတ်မောနေရပါလား - Site တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ waste ဖြစ်သွားတဲ့ သစ်တွေ အပုံလိုက်ကြီးကို ကြည့်ပြီး အမြဲ စိတ်ပျက်နေရပါသလား - Site တစ်ခုကို မြန်မြန်ပြီးချင်တယ်၊ အချိန်ကုန်သက်သာချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Conventional Method (Traditional Method) နဲ့ဆိုရင် Formwork လုပ်ငန်းမှာတင် အချိန်ပေးရတာကို စိတ်ပျက်နေပါသလား - အလုပ်သမားတွေ အများကြီးကို ထိန်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ အလုပ်သမား အလုံအလောက် ခေါ်ယူရရှိနိုင်ဖို့ စိတ်ပူပန်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကို စိတ်ပျက်နေပါသလား အထက်ပါ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ Zulu Life Group of Companies က တာဝန်ယူပါရစေ။ ✔ လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုနေကျ Traditional Method ကဲ့သို့ ကွန်ကရစ်လောင်းရင်း Formwork ပွင့်ကျမှာ၊ ပြိုကျမှာလည်း စိတ်ပူစရာမလိုခြင်း၊ ✔သစ်ဈေးတွေကြီးတာ၊ အလွယ်တကူ ဝယ်မရတာတွေ အတွက်လည်း ပူပန်စရာမလိုခြင်း၊ ✔ Formwork Installation လုပ်ရာမှာလည်း Conventional Method နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွန်မြန်ခြင်း၊ ✔ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အမှိုက်ရှုပ် သက်သာခြင်း၊ လုပ်ငန်းပြီးချိန်တွင် waste materials များ စွန့်ပစ်ရန် စိတ်ပူနေစရာမလိုခြင်း၊ ✔ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ပြီးနိုင်ခြင်း၊ ✔ Formwork ဖြုတ်ပြီးသည့်အခါတွင်လည်း မျက်နှာပြင်အား ပြန်လည်အချောကိုင်စရာမလိုဘဲ ပတ်တီးတန်းရိုက်၍ ဆေးသုတ်နိုင်ခြင်း စသည့် အားသာချက်တွေ အလွန်များတဲ့အပြင် ✔ ဈေးနှုန်းလည်း ပိုသက်သာ၊ အာမခံချက်လည်း အပြည့်အဝပေးပြီး၊ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ Zulu Life Group of Companies ရဲ့ Formwork လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့… ✔ ဖုန်း : 09454153430 ကို အခုပဲ ဖုန်းဆက်လိုက်ကြပါနော်… ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရောက်ပို့၊ တပ်ဆင်၊ ဖြုတ်သိမ်း စနစ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကို တာဝန်ယူပေးပါရစေ…
SCG Centurion Tile Moss Green Color
ရောမ စတိုင် အလိပ်ကွန်ကရစ် ပုံစံ ခေါင်မိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ကွန်ကရစ် အမိုး Tile များသည် သာမန် အမိုးများထက် အပူဒဏ် ကာကွယ်ပေးပြီး အေးမြမှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း စွမ်းအင်ချွေတာ နိုင်ခြင်း၊ တာရှည်ခံစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း စသည်အကျိူးကျေးဇူးများ ရရှိစေနိုင်သည်။
SCG Smartboard Squared Edge ကို ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင် များ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော မျက်နှာကြက် အမျိူးအစား တစ်ခု ဖြစ်သည်။တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူစေပြီး အတွင်းရော အပြင် နှစ်ခုလုံး တပ်ဆင်ရသော gapping ဖြစ်သည်။ Acrylic ဆေးဖြင့် ခြယ်သထားသောကြောင့် ၁၀၀% အရောင်လွင့်ခြင်း ပြယ်ခြင်း မရှိပဲ လှပစေသည်။ Care Warning •Apply for ceiling only by following installation manual. •Do not use as structure apllication. •Do not eat. •Do not inhale the dust from cutting, screwing or polishing products.
High Quality Laminated Floor- ခိုင်ခံ့လှပသေသပ်သောကြမ်းခင်းများ
12500 ~ 19000 Kyats
SCG Smartboard SQuared Edge ကို နံရံတွင် အလှဆင်သတ္တုတစ်ခု အဖြစ်အသုံးပြုရန် အထူးသင့်တော်သော ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး တာရှည်ခံ အသုံးပြုနိုင်သည်။နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ FIRM &amp; FLEX နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချ စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။SCG Smartboard ကို SCG Porland Cement,Silica and Special Cellulose fiber များဖြင့် အထူးရောစပ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် နံရံ ၏ အတွင်းကော အပြင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည်။ဆိုးရွားသော ရာသီဥတု ဒဏ် နှင့် အပူဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီး မှုများ၊ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရာသီဥတု ဒဏ်များကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သည်။
မြေထဲပင်လယ်အောက်ကြမ်းပြင် အလှတရားဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော ကွန်ကရစ်အမိုး Tile ကို သင့်အိမ်တွင် မိုးထားခြင်းဖြင့် အပူဒဏ်ကို တွန်းလှန်ပေးပြီး အိမ်တွင်းကို အေးမြမှု ပေးနိုင်ခြင်း၊ ခေတ်မှီသော ဒီဇိုင်းဆန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အမြင်တင့်တယ် လှပစေသည်။တစ်ခါအသုံးပြုပြီးလျှင် အလွယ်တကူ ပျက်စီးခြင်း မရှိပဲ တာရှည် အသုံးခံသော ကွန်ကရစ် အမိုး အမျိူးအစားဖြစ်သည်။
အသုံးပြုရန်နေရာ -	ပလာစတာနှင့် အင်္ဂတေအတွက် အုတ်စီခြင်းနှင့် ရေခံအဆက်များအတွက်နှင့် -	အဆောက်အဦး အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်းအတွက် အသုံးချခြင်း။ အကျိုးရလဒ် -	အင်္ဂတေကို ရေလုံစေခြင်း၊ အင်္ဂတေအက်ခြင်းကိုလျော့ကျစေခြင်း။ -	အအိပ်မြန်ခြင်း၊ ဆားပါဝင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် သံချောင်းများမပျက်စီးနိုင်ခြင်း။ ရောနှောရန်အချိုး -	ဆေးရည်နှင့် ရေအရင်ရောစပ်ပြီးမှ အင်္ဂတေဖျော်စပ်ရပါမည်။ -	အရည်ထဲသို့ အမှုန့် ရောလောင်းပြီး မွှေရပါမည်။ ထုပ်ပိုးမှု -	3 လီတာဗူး / 20 လီတာပုံး / 200 လီတာစည်။ ထူးခြားချက် -	ဆင်ဝင်၊ ခေါင်မိုးအင်္ဂတေနှင့် အပြင်နံရံတို့ ကို ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ရေလုံစေပါသည်။ -	ရေကူးကန်နှင့်ရေပန်းကန်တို့ ကို ဆားပေါက်ခြင်းမှကာကွယ်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ကုန်ကျစရိတ်အထူးသက်သာပြီး လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူသော Hydrophobic ရေလုံဆေးရည် ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ DAVCO NO.1 ဟာအုတ်စီပြီးသော နံရံများကို အချောကိုင်ရာတွင် ဘိလပ်မြေနှင့် ရောစပ်ပြီး နရံအားအချောကိုင်ရုံဖြင့် ရေလုံစေသော ဆေးရည်ဖြစ်ပါသည်။ထူးခြားချက်မှာ အင်္ဂတေ ကိုရေလုံစေရူံသာမက အက်ကြောင်းများဖြစ်ခြင်းကိုလည်း လျှော့ ချပေးခြင်း၊ အအိပ်မြန်ခြင်း ၊ဆားပါဝင်မှူ မရှိသောကြောင့် သံချောင်းများ သံချေးတက်ခြင်း အစရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ အပြင် ကြမ်းခင်းများ topping လောင်းရာတွင် လဲထည့်သွင်းကာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ရေလုံစေပါသည်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုပါက MAX BOND Myanmar Co.Ltd Ph 09-262764505 ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။